My Life asaDoctor ဆရာဝန်ဘဝ စာမျက်နှာ: July 2013
Posted by Dr. Tint Swe at 12:45 PM0comments
• အိန္ဒိယမှာ “ဆရာဝန်များနေ့” ဟာ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့ဖြစ်တယ်။ အနောက်ဘင်္ဂလားနယ်က ဆရာဝန်ကြီး (ချန်ဒရာ ရွိုင်း) ကိုဂုဏ်ပြုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်ရဲ့ အမြင့်ဆုံး (ဘားရတ် ရတ်တနာ) ဘွဲ့ကိုရခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဝန်အားလုံးကို ဂုဏ်ပြုတဲ့နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။
• အမေရိကားမှာ ပထမဆုံး ဆရာဝန်များနေ့ကို ၃ဝ-၃-၁၉၃၃ နေ့က ဝင်းဒါး၊ ဂျော်ဂျီယာမှာလုပ်ခဲ့တယ်။ ဒေါက်တာ ချားလ်စ် အယ်လ်မွန်းရဲ့ ဇနီးကနေ စခဲ့တာပါ။ ကွယ်လွန်သွားကြတဲ့ ဆရာဝန်တွေကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ ဆုမွန်ခြွေ ကတ်ပြားနဲ့ ပန်းလှလှလေးတွေတွေ ပို့ပါတယ်။ ပန်းနီနီကိုသုံးပါတယ်။ ၃ဝ-၃-၁၉၅၈ ရောက်တော့ အမေရိကန် အောက်လွှတ်တော်ကနေ ဆုံးဖြတ်ချက်တခုချပေးပြီး ဆီးနိတ်ကို နိုင်ငံတော်ဆရာဝန်များနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ဘို့ရာ ပို့ပါတယ်။ ၃ဝ-၁ဝ-၁၉၉ဝ မှာ သမတ (ဂျော့ ဘွတ်ရှ်) ကနေ S.J. RES. #366 ကို လက်မှတ်ထိုးပြီးနောက် Public Law 101-473 ဆိုတာဖြစ်လာတယ်။ ၃ဝ-၃-၁၉၉၁ ကစပြီး "National Doctors Day" ဖြစ်လာခဲ့တယ်။
• ကျူးဘားမှာတော့ လူတွေလေးစားတဲ့ ဆရာဝန် ဒေါက်တာ ကားလို့စ် ဖင်လေးရဲ့ မွေးနေ့ကိုဂုဏ်ပြုပြီး ဒီဇင်္ဘာ ၃ ရက်နေ့ကို “ဆရာဝန်များနေ့” လို့ သတ်မှတ်တယ်။
• အီရန်မှာတော့ သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့ကို “ဆရာဝန်များနေ့” လို့ သတ်မှတ်တယ်။
Myo Aung ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာ ဘယ်နေ့သတ်မှတ်ရင် ကောင်းပါမလဲ? စည်းလုံးညီညွတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့တော့အမှန် တကယ်လိုအပ်နေတာပါဘဲ။
Tint Swe ကျွန်တော်လဲ သိပ်သိတာ မဟုတ်ဘူးဗျ။ စဉ်းတော့ စဉ်းစားနေမိတယ်။ ဒေါက်တာဘသန်းက အတော်ကြီး စီနီယာကျတယ်။ ဦးနေဝင်းနဲ့ဆက်နေလို့ သဘောတူနိုင်ကြမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒေါက်တာထွန်းရွှေနဲ့ မောင်သင်တို့က စာပေနဲ့ အနုပညာမှာ နာမည်ထွက်ခဲ့တယ်။ လူထုအကျိုးဆောင်ရာမှာ နာမည်ထွက်တာကတော့ မရှိသလောက်ပါဗျာ။ ရှက်မိပါရဲ့။ ခေါင်းတွေအများကြီးစုရင်တော့ ထွက်လာမှာပါ။
Posted by Dr. Tint Swe at 11:38 PM0comments
• ကျွန်တော်တော့ တကယ်အမျိုးမတော်ဘဲနဲ့ 'အကို'၊ 'ဦးလေး'၊ 'အဘ' စဖြင့် ခေါ်တာနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို 'သမီး'၊ 'သား' ထည့်ပြောတာကို အားမပေးပါ။
• ယောက်ျားလေးချင်း “အကို” သုံးတာလဲ ပတ်ဝန်းကျင်ကို သတိထားသင့်တယ်။ အခုခေတ်မှာ ယောက်ျားချင်း ပခုံးဖက်နေရင် မျက်ခုံးပင့်ကြည့်တာခံရတတ်တယ်။ သူများနိုင်ငံတွေမှာ (ဂေး) တွေသာ အဲလို လုပ်လေ့ရှိတယ်။
• ကျွန်တော့်ကိုလဲ ဗိုလ်လိုရေးရင် “Sir” လို့ မသုံးစေဘဲ၊ “Saya” လို့သာ ပြင်ပေးပါတယ်။ “Doctor” ဒေါက်တာ ဆိုတာတော့ နားယဉ်နေကြပါပြီ။
• "ဆရာ" လို့ ရိုးရိုးလေး ခေါ်တာကို ပိုသဘောကျတယ်။ ဆရာဝန်နဲ့ လူနာကြားမှာ တွယ်ကပ်မှုကို အထူး သတိထားရပါတယ်။
• ဒါမှာလဲ "ဆရာကြီး" လို့ဆိုရင် မမှန်ဘူးလို့ ပြန်ရှင်းပြောပါတယ်။ ကိုယ်က ငယ်ချင်လို့ပြောရတာ မဟုတ်ပါ။ ဆရာဝန်လောကမှ အထူးကုတွေ၊ (ဝပ်) အကြီးဆုံးတွေကိုမှ "ကြီး" ထည့်လေ့ရှိလို့ပါ။
• ဆေးကျောင်သားဘဝမှာတော့ အထူးကုဆရာဝန်မကြီးတွေကိုတော့ "မမ" လို့ခေါ်ကြတဲ့ ထုံးစံရှိတယ်။ ချစ်-ကြောက်-ရိုသေ အစစ်ဖြစ်ပါတယ်။
• ငယ်ရွယ်တဲ့ မိန်းကလေးတိုင်းကို “သမီး” လို့ မခေါ်မိအောင် သတိထားပါတယ်။ တခါခါ "သမီး" လို့ ခေါ်မိသွားရင် မြေးအရွယ်မို့သာ ခေါ်မိမယ်။
• “ခွေးကောင်” လို့ အခေါ်ခံရသူဟာ ကျွန်တော့် စိတ်ချလက်ချ အားကိုးရတဲ့ လက်ထောက်ဖြစ်ပါမယ်။
• သမီးအရင်းကို “ခွေးမလေး” လို့ တခါတခါခေါ်ပါတယ်။
• ကိုယ့်ကိုယ်ကို “သား” လို့သုံးနှုန်းတဲ့ ယောက်ျားလေးတွေက “သမီး” လို့သုံးတဲ့ မိန်ကလေးတွေထက် စောပြီး အပြောင်းအလဲ မလုပ်လို့ မဖြစ်တော့တဲ့ အချိန်ကာလကို ရောက်လာကြတယ်။
• သားလို့သုံးသူတွေရော သမီးသုံးတွေပါ ကိုယ့်မှာ သားသမီးရတဲ့အချိန်ရောက်ရင် မပြောင်းလို့ မဖြစ်သလောက် အခြေအနေကို ရောက်ကြတယ်။ တချို့မှာတော့ ဒိထက်စောမှသာ တင့်တယ်လိမ့်မယ်။
• မျက်စိအောက်ကနေ ကလေးအမေဘဝ ရောက်သွားတဲ့သူတွေကလဲ သူ့တို့ကိုယ်သူတို့ ဆရာဝန်ကို သမီးလို့ ပြောတာလဲရှိတာပေါ့။
• စောစောပိုင်းခေတ်မှာ အထူးသဖြင့် တောရွာတွေမှာ ယောက်ျားလေးတိုင်း ကိုရင်ဝတ်ပြီးနောက် သူ့ကို ကိုရင်လို့ဘဲ ဆက်ခေါ်လေ့ရှိတယ်။ တရွာလုံး ကိုရင်တွေများတော့ ကိုရင်ဘယ်သူ-ဘယ်ဝါလုပ်ရတယ်။ တချို့ဆို ကွယ်လွန်တဲ့အထိ ဒီအတိုင်းခေါ်ကြတယ်။
• လူ့သဘာဝကိုတော့ ပြောစရာမရှိပါ။ ဆရာ-လူနာ ဆက်ဆံရေးမှာတော့ စည်းခြားသင့်ကြပါတယ်။
Posted by Dr. Tint Swe at 11:34 PM0comments
• နိုင်ငံအတော်များများမှာ နှစ်စဉ် ဇွန်လ (၁ဝ) ရက်နေ့လို့သတ်မှတ်တယ်။ တချို့နိုင်ငံတွေက ဇွန် တတိယ တနင်္ဂနွေနေ့လို့ သတ်မှတ်တယ်။ • ‘ဝီကီပီးဒီယား’ ...
Mar 14, 2011 at 9:07 PM ဆရာက ဆရာဝန်-စာရေးဆရာလားဟင်။ ဆရာ့ဘလော့တွေ အလကား ဖတ်ခွင့်ရတာ ကံကောင်းလိုက်တာ။ ဆရာနဲ့ ထိတွေ့ခွင့်ရအောင် ဖန်တီးပေးတဲ့...
ဆရာဝန်ဖြစ်ကာစမှာ ကိုယ့်အရင် ဖြစ်ထားပြီးတဲ့ ဆရာဝန်တွေဟာ လက်တွေ့နယ်က ဆရာတွေဘဲ။ ဆေးလောကမှာ စီနီယာတွေက နောက်လူတွေကို ဆေးကျောင်းမှာကတည်းက ဖေးမ-...
ဆေးစာတွေ ဘာသာပြန်ရတော့ ဘာသာပြန်စာအုပ်တွေ ငယ်ငယ်က စွဲခဲ့ဘူးတာ အမှတ်ရပါတယ်။ သူ့ခေတ်နဲ့သူ ကောင်းခဲ့ပါတယ်။ (ရှားလော့ခ်-ဟုမ်းစ်) ဝတ္ထုတွေကနေ ဆရြာ...
Sympathy and Empathy သနားစိတ်၊ စာနာစိတ် နှင့် ဆရာဝန်
လူနာတဦးရဲ့ရောဂါအခြေအနေကို ညှာတာစိတ်နဲ့ သက်သာအောင်လုပ် ပေးချင်တာကို သနားစိတ် Sympathy လို့ ခေါ်မယ်။ လူနာတဦး ဖြစ်ပျက်ခံစားနေရတာကို ကိုယ်ချင်း...
တစ်ခုလောက် မေးခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။ တကယ်လို့များ ပိုက်ဆံမတတ်နုိင်တဲ့ ကိုယ်ဝန်သည်တစ်ယောက် ဆရာ့ရဲ့ရှေ့မှာ ရောက်လာမယ်ဆိုရင် ဗိုက်ခွဲမွေးမှရမယ်ဆို...